Silicones kacha mma maka akwarium: ntụnyere na ntuziaka | Nke azụ
Azụ akwarium mmiri
Mee N'onwe Gị Aquariums
Silicone nke aquarium
Natalia Cerezo | 17/09/2021 13:20 | Mee N'onwe Gị Aquariums
Obi abụọ adịghị ya, silicone maka akwarium bụ ihe dị mkpa anyị ga -enwerịrị maka ihe ọ bụla ga -eme, ya bụ, ma ọ bụrụ na mberede mgbapụta apụta na akwarium anyị wee malite ịfufu mmiri. Silicone bụ ngwaahịa kacha mma anyị ga -ahụ ka ọ rụzie ya, ebe ọ bụ na mmiri anaghị egbochi ya kpamkpam, ma ọ bụrụ na akwadobere ya, ọ naghị emerụ ahụike azụ anyị.
Ke ibuotikọ emi anyị ga -ahụ ihe silicone anyị nwere ike iji na akwarium anyị, ụdị na agba ya kacha mma na ọbụlagodi ebe ịzụta ngwaahịa dị ọnụ ala. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'okwu a niile nke akwarium DIY, anyị na -akwadokwa ka ị gụọ akụkọ a gbasara ị na-ewu aquarium nnu nke gi.
1 Silicone aquarium kachasị akwadoro
2 Kedu ihe kpatara silicone aquarium ji bụrụ ihe pụrụ iche na ịnweghị ike iji naanị silicone ọ bụla?
3 Ọ bụ silicone na -anọpụ iche dabara maka akwarium?
4 Aquarium silicone agba
5 Otu esi etinye silicone aquarium n'ụzọ ziri ezi
6 Ogologo oge ole ka ekwesịrị ikwe ka silicone dị na akwarium kpoo?
7 Akara silikon Aquarium kacha mma
7.3 Mkpụrụ obi
8 Ebe ịzụta silicone aquarium dị ọnụ ala
Silicone aquarium kachasị akwadoro
Ka anyị wee ghara imehie na nhọrọ, n'okpuru anyị achịkọtara ụfọdụ silicones aquarium kacha akwadoro nke ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla:
Silicone nwere obi ike ...
Soudal - katrij ...
Akwarium nwere obi ike nke ...
Kedu ihe kpatara silicone aquarium ji bụrụ ihe pụrụ iche na ịnweghị ike iji naanị silicone ọ bụla?
Silicone akwarium bụ ihe bara ezigbo uru ma maka ịrụzi akwarium ochie ma ọ bụ mebiri emebi ma ọ bụ gbakọta nke ọhụrụ, yana maka gluu ma ọ bụ idobe akụkụ na ihe ịchọ mma. Agbanyeghị na enwere ngwaahịa ndị ọzọ na -arụ otu ọrụ, ihe ịrụ ụka adịghị ya na silicone bụ nke a na -ejikarị eme ihe, ebe ọ bụ ngwaahịa dabere na silicone na acetone nke na -eguzogide oke okpomọkụ, na -eme ka ọ dị mma. Site n'ụzọ, ihe a anaghị arụ ọrụ na aquariums acrylic, mana a ga -eji iko mee ha.
Kaosinadị, ọ bụghị silicones niile dị na azụmahịa dị mma maka iji na akwarium, ebe ha gụnyere ụfọdụ kemịkal ma ọ bụ fungicides nke nwere ike imetụta ahụike azụ gị. Agbanyeghị, n'ụkpụrụ, ọ bụrụ na akara ahụ kwuru "silicone 100%" bụ akara na -egosi na ọ nweghị nchekwa, ọ kacha mma ịhọrọ ngwaahịa emebere maka ojiji na akwarium.
Ọ bụ silicone na -anọpụ iche dabara maka akwarium?
Anyị nwere ike kewaa silicone ụzọ abụọ buru ibu, ma ọ bụ acetic ma ọ bụ na -anọpụ iche. N'okwu nke mbụ, ọ bụ silicone nke na -ewepụta asịd yana nwee isi isi ya, yiri mmanya. Ọ nwere ike imetụta ụfọdụ azụ na n'elu nke ahụ ọ na -ewe ogologo oge iji kpọnwụọ.
N'aka nke ọzọ, silicone na -anọpụ iche anaghị ahapụ ụdị asịd ọ bụla, anaghị anụ isi ya ma kpọnwụọ ngwa ngwa. Na ụkpụrụ, ị nwere ike iji ya maka akwarium, ọ bụ ezie na a na -atụ aro ya nke ukwuu ka ịzụta silicone akọwapụtara maka iji rụọ ọrụ na ọnọdụ a, ebe ọ bụ na ihe mejupụtara nwere ike gbanwee n'etiti ndị nrụpụta. Emebere silicones pụrụ iche maka ojiji n'ime akwarium, yabụ na ị gaghị enweta ụjọ na -atụghị anya ya.
Aquarium silicone agba
Ọ bụrụhaala na silicone ị zụrụ bụ ihe pụrụ iche maka akwarium, ya bụ, nke ahụ ebula kemịkal ọ bụla nke nwere ike ibute ndụ azụ gị, nhọrọ nke otu agba ma ọ bụ ọzọ na silicone bụ naanị ihe ịchọ mma. Ihe na -adịkarị (n'agbanyeghị na enwere ndị ọzọ, dị ka isi awọ ma ọ bụ aja aja) bụ agba silicone na -acha ọcha, ma ọ bụ na -acha uhie uhie.
Lee nkwa Hụ atụmatụ
Ọ bụ ezie na ọ bụ enweghị mgbagha ụcha silicone kacha mara mmaSilicone na -acha ọcha anaghị adịkarị mma nke ukwuu na akwarium n'ihi agba ya (ọ bụ ezie na ihe na -agbanwe ma ọ bụrụ na akwarium gị nwere etiti ọcha). Ị nwere ike iji ya mechie onyogho na ala akwarium.
Agba silicone kachasị akwadoro maka akwarium bụ, n'enweghị mgbagha, na -apụta. Ọ bụghị naanị na ọ baghị uru ụdị akwarium gị, mana ọ ga -agwakọta nke ọma na mmiri na iko. Ị nwere ike iji ya rapara ihe ọ bụla ma ọ bụ rụzie ihe ọ bụla, ekele maka agba ya adịghị adị, ị gaghị achọpụta ihe ọ bụla.
Black silicone, dị ka ọ dị na ọcha, bụ ngwaahịa ga -adabere na uto gị na agba nke akwarium gị. Dị ka yayas na -ekwu, ihe dị mma gbasara oji bụ na ọ bụ agba nwere oke ahụhụ, nke nwekwara ọ nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ izo ihe ma ọ bụ rapara ihe ịchọ mma na mpaghara gbara ọchịchịrị, dị ka ndabere.
Otu esi etinye silicone aquarium n'ụzọ ziri ezi
Silicone na -aga nke ọma ịrụzi akwarium, mana ịnweghị ike itinye ya n'ọrụ dịka ọ dị, na ntụle, ị ga -eburu n'uche usoro ọnọdụ yana otu esi aga n'ihu:
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị zụta akwarium nke abụọ, gbaa mbọ hụ na enweghị mgbaji na, ọ bụrụ na ọ dị, jiri silicone rụzie ha ụzọ.
Dị mma karịa tọgbọ akwarium ahụ tupu ịga n'ihu, ebe ọ bụ na elu ebe a ga -etinye silicone ga -adị ọcha ma kpọọ nkụ, na mgbakwunye, ọ ga -adị mkpa nkụ.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịsa akwarium ahụ niile, ị nwere ike ịtọgbọ ya ruo mgbe fissure ahụ dị n'elu, n'agbanyeghị na n'ọnọdụ a ị ga -emerịrị ya kpachapụ anya nke ọma ka ị ghara itinye silicone mmiri mmiri n'ime mmiri (Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, anyị anaghị akwado ya ma ọlị).
Ọ bụrụ n’ị na-aga rụkwaa otu iko ejiri silicone rụzie ya na mbụ, were mma mma na acetone hichapụ ihe foduru ochie ahụ. Kpọọ ya nke ọma tupu ọ rụzie ya.
Silicone ị na -etinye ọ gaghị enwe afụ ọnụMa ọ bụghị ya, ha nwere ike ịgbawa wee bute mmiri mmiri ọzọ.
N'otu aka ahụ ọ bụrụ na ị ga -ejikọ iko abụọ na silicone, hụ na ihe dị n'etiti ha abụọ. Ọ bụrụ na iko dị na iko ọzọ ọ nwere ike ịgbawa ma ọ bụrụ na ha belata ma ọ bụ gbasaa n'ihi mgbanwe okpomọkụ.
Mmezi nke n'ime n'èzí ka silicone wee jupụta mgbape kpamkpam.
N'ikpeazụ, ka ọ kpọnwụọ ọ bụrụhaala na ịchọrọ.
Ogologo oge ole ka ekwesịrị ikwe ka silicone dị na akwarium kpoo?
Maka ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, dịka anyị siri gwa gị, ị ga -ahapụrịrị silicone ka ọ kpọọ nkụ nke ọma, ma ọ bụghị na ọ ga -adị ka ị meghị ihe ọ bụla. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa na ị na -asọpụrụ usoro ihicha ngwaahịa a, nke na -adịkarị n'etiti awa 24 na 48.
Akara silikon Aquarium kacha mma
Na ahịa anyị na -ahụ a ọtụtụ akara silicone, yabụ ịchọta nke dị mma maka akwarium anyị nwere ike bụrụ ezigbo njem. Ọ bụ ya mere anyị ga -eji hụ na -atụkarị aro na ndepụta ndị a:
Olivé Chemistry -...
Silicones Olivé bụ a kpochapụwo na -ewu ụwa. Ahịrị ya maka akwarium na -apụ apụ maka ihicha ngwa ngwa, nrapado dị mma na ịgbatị. Na mgbakwunye, ha na -eguzogide ịka nká nke ọma, yabụ ngwaahịa a ga -adịru ọtụtụ afọ na -arụ ọrụ ya. Dị ka silicones niile dị n'ụdị a, ngwaahịa a dakọtara maka iko gluing.
Rubson - Putty ...
Akara a na -atọ ụtọ na -akpọsa na ngwaahịa ya, ọkachasị maka akwarium, bụ na -eguzogide nrụgide mmiri ma dakọtara na akwarium mmiri nnu. Ọ na -apụta ìhè na, dịka ọ na -adaba na iko, ị nwere ike ịrụzi akwarium, tankị azụ, griin haus, windo ... na mgbakwunye, ọ na -eguzogide ụzarị UV site na oriọna, yabụ na ọ gaghị akwụsị irube isi.
Mkpụrụ obi pụtara maka ịbụ ngwaahịa na -atụgharị anya na ezigbo maka akwarium, nke a na -akpọsa dị ka nke na -eguzogide mgbanwe mgbanwe okpomọkụ. Ọ na -arụ ọrụ ijikọ iko na iko, dị ka ọtụtụ silicones, enweghị ike ese ya. Ọ nwere ezigbo ọkwa nrapado.
Ihe dị mma gbasara ngwaahịa nke ika a bụ na, na mgbakwunye na ahaziri ya maka akwarium, cannula nwere cannula wuru n'ime nke enwere ike itinye ya n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche, nke dị mma maka ịrụzi obere oghere na enweghị iji egbe. Na mgbakwunye, ọ na -akpọ nkụ ngwa ngwa ma gbochie ụdị nchapu ọ bụla.
Ihe kpatara ya -...
Anyị na-ejedebe ika ọzọ akwadoro nke ukwuu, nke na -abụghị naanị na -emepụta silicones nke ezubere na akwarium, mana a na -ejikwa ya nke ukwuu na ngalaba ọkachamara. Silicone Wurth pụtara maka ihicha ngwa ngwa, ọ naghị adị njọ ka oge na -aga, na -eguzogide oke okpomọkụ na oke ala yana ịdị nrapado. Agbanyeghị, ị ga -akpachara anya n'oge nkụ ma debe silicone na ọnọdụ okpomọkụ egosipụtara na karama ahụ.
Everbuild WAT5 -...
Ahia ahia a Ọkachamara ngwaahịa DIY Ọ nwere ezigbo silicone maka akwarium. Ha pụtara maka oge ihicha ya ngwa ngwa, yana dakọtara ọ bụghị naanị na iko, kamakwa yana aluminom na PVC. Ọ na -apụ apụ, enweghị fungicides ma ọ dị mfe itinye ya, na -eme ka ọ bụrụ nhọrọ akwadoro nke ukwuu.
Silicone pụrụ iche maka akwarium nke ika a enwere ike iji ya mee ihe n'èzí, ebe ọ na -eguzogide mmiri na ihu igwe. Ọ nwere isi na -anabata nke ọma, na -agbanwe agbanwe ma na -araparakarị na iko, na -eme ka ọ dabara maka ịrụzi ma ọ bụ wuo akwarium.
Ebe ịzụta silicone aquarium dị ọnụ ala
Enwere ọtụtụ ebe dị iche iche ebe anyị nwere ike zụta silicone aquarium, ebe ọ bụ na ọrịre ya abụghị naanị n'ụlọ ahịa anụ ụlọ, mana ọ nwekwara ike ịchọta ya na ebe pụrụ iche na DIY na iwu ụlọ.
Nke mbụ, n'ime Amazon ị ga -ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị silicone. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịkpọtụrụ echiche nke ndị ọrụ ndị ọzọ iji chọpụta ma họrọ silicone dabara gị mkpa. Ma ọ bụrụ na enwere nkwekọrịta ọrụ Prime, ị ga -enwe ya n'ụlọ n'egbughị oge.
Leroy Merlin Ọ nweghị ụdị dịgasị iche iche, n'ezie, na ibe ya n'ịntanetị ọ nwere naanị silicones abụọ akọwapụtara maka akwarium site na ụdị Orbasil na Axton. Ihe na -atọ ụtọ bụ na ị nwere ike lelee ma ọ dị na ụlọ ahịa anụ ahụ, ihe bara ezigbo uru ịpụ ọsọ ọsọ.
N'ụlọ ahịa dị ka nrutu Ha nwekwara ụdị silicone dị, n'agbanyeghị na akọwaghị ya ma ọ bụrụ na ha bụ maka akwarium. Agbanyeghị, ị nwere ike lelee nkọwapụta wee họrọ ma ị ga -azụta ya n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị site na Ahịa ya, nhọrọ na -atọ ụtọ nke ukwuu.
En Bricomart Ha nwere mgbaaka pụrụ iche maka akwarium, opekata mpe n'ịntanetị, site na ika Bostik. Dị ka ọ dị na erbs ndị ọzọ yiri ya, ị nwere ike lelee nnweta na ụlọ ahịa kacha dịrị gị nso, bulie ya ma ọ bụ zụta ya n'ịntanetị.
N'ikpeazụ, na Bauhaus Ha nwekwara otu silịkị, nke doro anya, nke akọwapụtara maka aquariums na terrariums, nke ị nwere ike ịhụ n'ịntanetị na ụlọ ahịa anụ ahụ ha. Ọ na -arụ ọrụ yiri weebụsaịtị webụsaịtị ndị ọzọ, ebe ị nwere ike ịtụ ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ buru ya n'ụlọ ahịa.
Silicone maka akwarium bụ ụwa niile nke, na -enweghị mgbagha ọ bụla, a ga -achịkwarịrị ya ka anyị ghara ịnọ na nche mgbe akwarium anyị nwere ihi mmiri. Gwa anyị, o meela gị? Kedu ahụmịhe ị nwere na silicone? Ị masịrị otu akara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Mee N'onwe Gị Aquariums » Silicone nke aquarium
CO2 maka akwarium
Mbelata nri na ngwa maka azụ